Rooted လုပ်ထားသော ဖုန်းကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ – Driver
ဗမာ English (SG) Filipino Bahasa Indonesia ខ្មែរ Bahasa Melayu ไทย Tagalog (Pilipinas) Tiếng Việt
Grab နှင့်ပါတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိရန်
Driver app အသုံးပြုပုံ လမ်းညွှန်ချက်များ
Android Device ကို Root လုပ်ထားခြင်းရှိမရှိ ဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲ?
1. Root Checker App ကို download ဆွဲ၍ install လုပ်ပြီး ဖွင့်ပေးပါ
2. သင့်ဖုန်းကို Root လုပ်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အတွက် Verify Root ကို နှိပ်ပေးပါ
Android Device ကို ဘယ်လို Unroot ပြန်လုပ်မလဲ?
Note: ထိုကဲ့သို့ Modified လုပ်ခြင်းသည် ဟန်းဆက်ထဲတွင်ရှိသော Data အားလုံးပျက်နိုင်သည့်အတွက် သင်ရဲ့ Data များကို Back UP လုပ်၍သိမ်းထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ သင်၏ Device နှင့်ပတ်သတ်ပြီးပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုများကို သင်၏သဘောဆန္ဒအရ လုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်ပီး အခြားပျက်စီးမှုတစ်ခုခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါက Grab အနေဖြင့်တာဝန်ယူသွားမည်မဟုတ်ပါ။
- SuperSU ကို downloadလုပ်၍ install လုပ်ပြီး ဖွင့်ပေးပါ။
- App မှာ Setting ကိုသွားပြီး Full Unroot ကို နှိပ်ပေးပါ
Apple iOS Device ကို Jail Break လုပ်ထားကြောင်းဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲ?
သင်ဖုန်း၏ App Store ကိုသွားပေးပါ။
Search tab ကိုနှိပ်ပြီး Cydia ကိုရှာပေးပါ။
သင်၏ဖုန်းမှာ Cydia ရှိလျှင် သင်၏ဖုန်းသည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Apple iOS Device ကို Jail Break လုပ်ထားခြင်းမှ ဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲ?
Note: ထိုကဲ့သို့ Modified လုပ်ခြင်းသည် Device ထဲတွင်ရှိသော Data အားလုံးပျက်နိုင်သည့်အတွက် သင်ရဲ့ Data များကို Back up လုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ သင်၏ device နှင့်ပတ်သတ်ပြီးပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုများကို သင်၏သဘောဆန္ဒအရ လုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်ပြီး အခြားပျက်စီးမှုတစ်ခုခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါက Grab အနေဖြင့်တာဝန်ယူသွားမည်မဟုတ်ပါ။
1. Setting ရှိ General ကိုသွားပြီး Reset ကိုနှိပ်ပေးပါ။
2. Erase All Content and Settings ကို နှိပ်ပေးပါ။
3. Passcode ရိုက်ထည့်ပြီး နောက် confirm နှိပ်ပေးပါ။
4. သင်၏ device ပေါ်မူတည်ပြီး Data ဖျက်သည့်အခါ မိနစ်အနည်းငယ် ကြာနိုင်ပါသည်။
4541 out of 6421 found this helpful
Demand Heatmap အသုံးပြုပုံ